SOO SAARKA MUUQAALKA - Chapman Technology Co., Ltd.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka waa mashiin mashiinka wax lagu shiido oo leh kontoroolka CNC (Computer Numerical Controlled), kaas oo loo adeegsado in lagu jaro qaababka 2D / 3D ama qaababka qalabka kala duwan. Mashiinka Mashiinka CNC waa habka loo yaqaan 'CNC machining' oo la mid ah xardhka iyo jarista labadaba, oo awood u leh inuu ku guuleysto hawlo badan oo lagu qabtay jarista iyo mashiinnada xardho. Sida xardho, wax shiidayaashu waxay isticmaalaan aalad wareegaysa oo wareeg ah. Si kastaba ha noqotee, aaladda mashiinka CNC wuxuu awood u leeyahay inuu ku dhex wareego dhidib fara badan, wuxuuna abuuri karaa qaabab kala duwan, boosas iyo godad. Intaa waxaa dheer, qalabka shaqada waxaa badanaa loo wareejiyaa qalabka wax lagu shiido ee jihooyinka kala duwan. Si loo guuleysto jawiga suuqa, Abuuraha Chapmanshirkaddu waxay si isdaba joog ah u maalgashanaysaa qalabka wax soo saarka CNC ee xawaaraha sare ku shaqeeya. Waxaan haynaa 4 nooc oo ah qalabka wax soo saarka MAKINO ee xawaaraha sare ka socda Japan, oo saxnimadooda ay gaari karto 0.005-0.01mm.
Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale leenahay 4 mashiinada CNC oo loogu talagalay nus-dhamaadka iyo 2 qallafsan.
Abuuraha ChapmanQalabka wax soo saarka ee 'CNC' ayaa dabooli kara dhammaan baahiyahaaga waxqabadka, ma aha oo keliya waxyaabaha la gelinayo, caaryada, qaybaha caaryada, laakiin waxaan sidoo kale ku siin karnaa adeegyada mashiinnada CNC qaybo badan oo qaybo ah macaamiisha otomatikada qaarkood.
Mashiinka ka baxa dareeraha korontada (EDM), oo sidoo kale loo yaqaan "dhimbiil" mishiinka, waa teknoolojiyad soo jirtay muddo dheer. Inta lagu gudajiro howsha EDM, koronto kusocota waxaa lagu hagaajinayaa inay udhaxeyso koronto iyo shey shaqo oo lagu kalasaaray dareeraha dielectric, oo u shaqeeya sida insulatorka korantada. Mar haddii la adeegsado danab sare oo ku filan, dheecaanka koronto-dhaliyaha ah waa la ionized oo wuxuu isu beddelaa koronto-qabe oo wuxuu baabi'iyaa goobta shaqada isagoo sii deynaya dheecaan dhimbiil si uu ugu qaabeeyo qaabka la doonayo ama qaabka ugu dambeeya.
Markaad ka shaqeyneyso dulqaadyada adag ee looga baahan yahay warshadaha Moldashi, waxaa muhiim ah in la dhigo mashiinnada saxda ah. EDM (Mashiinka Dheecaanka Korantada) Mashiinnada jarista siligga ee kaashanaya khubaradayada mashiinnada shahaadeysan ee shahaadada haysta iyo waaxda injineernimada, waxay siinayaan Soo-saarista Guud saxsanaanta looga baahan yahay inay ku dhex shaqeyso shirkaddan.
Axdi qarameedka Mashiinka:
Milling waa habka loo adeegsado iyadoo la adeegsanayo jareyaasha wareega si loo soo saaro walxaha iyada oo loo sii wado cutterka qayb shaqo. Tan waxaa laga yaabaa in lagu sameeyo jihooyin kala duwan oo ku yaal hal ama dhowr faasas, xawaaraha madaxa gooyo, iyo cadaadiska.
Qaar ka mid ah caaryada saxda ah, saxsanaanta isku dheelitirka ee 'Inserts', 'Lifter', Slider ', iyo qaybaha kale ee qaabdhismeedka caaryada ayaa aad muhiim u ah. Guud ahaan, saxsanaanta wax soosaarka ee Furimaha Nadiifintu waxay u baahan tahay inay ahaato gudaha 0.005mm.
Caaryada Fit iyo Golaha:
Waxaa jira 8 koox oo ku jira aqoon isweydaarsigayaga kululeeyaha. Shan ka mid ah kooxaha caaryada ayaa mas'uul ka ah soo saarista wasakhahaasi dhoofinta, saddexda kooxood ee kalena waxaa loo qorsheeyey caaryadeena reerkeena.
Ka dib markii caaryada taam ahaanta la dhammeeyo, waxaan u baahanahay inaan badbaadinno caaryada oo aan sifeyno. Xaqiiji in tayada caaryadu ay la kulmi karto shuruudaha imtixaanka sida ugu dhakhsaha badan.